Budata nke kacha mma ama na akwụkwọ ahụ aja n'ihi na gị gam akporo. Hazie mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba nkume gị otu n'ime kpakpando ndị a ma ama n'oge ahụ, olee nke kachasị gị mma?
Hazie gị gam akporo ekwentị na nke kacha mma na akwụkwọ ahụ aja starring ndị kasị ama kpakpando nke taa. Site na ndị ọbụ abụ ọkacha mmasị gị, ndị na-eme ihe nkiri ma ọ bụ ndị na-eme ihe nkiri na ụdị ndị kachasị dị egwu n'ụwa. Nwere ike nweta arụsị gị dị ka akwụkwọ ahụaja gị n'ụzọ dị mfe na enweghị ọnụ ahịa.
Họrọ kpakpando kachasị amasị gị site na nhọrọ dịgasị iche iche dị na gallery. Inweta ọkacha mmasị gị omee ma ọ bụ na-agụ egwú na gị bụ ugbu a nnọọ mfe ekele niile ndị a na akwụkwọ ahụ aja maka gam akporo.
N'okpuru ị nwere gallery na na akwụkwọ ahụ aja maka mbadamba ma ọ bụ mkpanaka ka ị wee tinye ọkacha mmasị gị ama agwa dị ka akwụkwọ ahụ aja.
Na foto a, onye na-eme ihe nkiri Olivia Wilde.Olivia Wilde nke ihe nkiri «Cowboys & Aliens» na Los Angeles, California na July 17, 2011. © Armando Gallo / Retna Ltd. *** NO TABS / SKIN MAGS *** HIGHER RATES TR *** NKE *** MAGH IT NOTALI *** Ọ B G GERMANY *** Ọ B UKghị UK *** Ọ B NO FRANCE *** Ọ B SGH S SL TO AKA AMI ỌZỌ *** BBARA NA USA RUO OCTOBER 17, 2011 ***